Dalka Kanada oo soo dhaweynaya Dadka uu Saameeyey go'aanka Xanibaada ee Donald Trump | SAHAN ONLINE
Dalka Kanada oo soo dhaweynaya Dadka uu Saameeyey go’aanka Xanibaada ee Donald Trump
TORONTO – Dowladda Kanada ayaa deganaansho kumeelgaar ah u ballan qaaday dhammaan dadka ay xanibtay go’aanka Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku gaaray in aysan dalkiisa soo geli karin muwaadiniinta 7-dal oo muslimiin ah.
Wasiirka Socdaalka iyo Arrimaha Qaxootiga ee dalka Kanada Axmed Xuseen oo asalkiisu yahay Soomaali auaa war-saxaafadeed uu qabtay ku sheegay in uusan karan karin tirada dadka uu saameyn karo go’aanka Kanada.
Axmed Xuseen ayaa sheegay in dhammaan dadka ku sugan dalkiisa Kanada ee uu xanibey go’aanka Donald Trump ay soo dhaweynayaan.
Waxaan xaqiijinayaa in dhamaan dadka ku sugan Kanada ee ku xanibmay ay Kanada ku sugnaan karaan, aniga oo isticmaalaya awoodeyda Wasiirnimo ayuu yiri Axmed Xuseen Wasiirka socdaalka iyo soo-galootiga ee dalka Kanada.
Go’aanka Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ,waxaa si weyn u canbaareeyey dalal badan oo caalamka ah ,waxaana kamid ah hoggaamiyaasha canbaareeyey Raiisal Wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau.
Madaxweynaha Maraykanka Trump ayaa go’aankiisu ,wuxuu jahwareer xooggan ka abuuray caalamka iyo qaar kamid ah Garoonada diyaaradaha iyadoo ay mudaharaadyo xooggan ka dhaceen dalka Maraykanka oo looga soo horjeedo go’aankaas.